Edemede Kylie Ora Lobell na Martech Zone |
Edemede site na Kylie Ora Lobell kwuru
Kylie Ora Lobell kwuru
Kylie Ora Lobell bụ onye edemede na-enweghị akwụkwọ nke nọ na Los Angeles. Ọ na-ede banyere ahịa maka NewsCred, Kwenye na Ntugharị, CMO.com, Social Media Examiner, na Vertical Response.
Uru na ọghọm nke Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi Abụọ
Monday, August 17, 2015 Sundaybọchị Sọnde, Ọgọstụ 16, 2015 Kylie Ora Lobell kwuru
Ndị ahịa anaghị enwe ndidi iji dozie igbe nnabata. Ha na-ejuputa ha na ozi ahia kwa ubochi, nke otutu n’ime ha edeghi aha na mbu. Dị ka International Telecommunication Union, 80 pasent nke azụmahịa zuru ụwa ọnụ e-mail nwere ike ịkọwa dị ka spam. Tụkwasị na nke ahụ, ọnụego email na-emeghe n'etiti ụlọ ọrụ niile dara n'etiti pasent 19 ruo 25, nke pụtara na pasent buru ibu nke ndị debanyere aha adịghịdị enye nsogbu pịa